अमेरिकी राष्ट्रपतिदेखि ब्रिटिश राजकुमारी र चर्चित बलिउड कलाकारसम्मको लुगाको डिजाइन गर्छन यी नेपाली युवक -
म यहाँ बसेको १७\_१८ वर्ष भयो। मेरो कामले नै भ्रमणमा जानुपर्छ। अब युरोप जानुपर्छ, चीन जानुपर्छ अनि एसियाका अरु देशमा पनि जानुपर्छ। जहाँ जाँदा पनि नेपाली राहदानीले जति दुःख पाउने कुनै राहदानी नै छैन। मलाई व्यापार गर्न पनि बाधा नै पर्‍यो अनि मैले यहाँको पनि हुने र नेपालको पनि हुने दोहोरो राहदानी लिने विचार गरेँ।तर त्यसका लागि नेपाल सरकारले व्यवस्था गरेको रहेनछ। मलाई के लाग्यो भने मैले काम गरेर यत्रो नेपालको नाम ल्याइरहेको छु, फाउण्डेशन खोलेर नेपालमा नै काम गरिरहेको छु, कारखाना नेपालमा नै छ, यदि एउटा राहदानीकै कारण कसैले मलाई ए यसलाई नेपालको माया छैन भनेर सोच्छ भने मलाई उहाँहरुको विचारलाई बदल्ने कुनै इच्छा पनि छैन। उहाँहरुले जे सोचे पनि हुन्छ तर विशुद्ध व्यवसायलाई ध्यान दिएर मैले अमेरिकाको राहदानी लिएको हुँ।नेपालमा तपाईँका धेरै प्रशसंक छन्। त्यहाँका कैयौँ युवायुवतीले तपाईँलाई नेपाललाई विश्वव्यापी रुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने एकजना चर्चित व्यक्तिका रुपमा लिन्छन्। उनीहरुका आशा अपेक्षा पूरा गर्न कत्तिको गाह्रो लाग्छ?
Previous यी महिनामा जन्मिने व्यक्ति अर्बपति हुनेछन ? जानकारी लिनुहोस
Next माघे संक्रान्तिमा भुलेर पनि नगर्नुहोस् यी गल्ति, नत्र ! आउन सक्छ खराब समय